Manoloana ny krizy politika any Venezuela eo amin'ny filoha voafidy Maduro, nefa tsy eken'i Amerikanina sy ireo firenena 30 tandrefana, dia nisafidy hanohana an'i Juan Guaido, nanandran-tena ho filoha vonjy maikan'i Venezuela ny Filoha malagasy, Andry Nirina Rajoelina.
Ny Rosianina, ny Sinoa, ny Iranianina moa dia manohana ny tsy hitsabahan'ny firenena vahiny amin'ny raharahan'i Venezuela, izay anisany manana tahirin-tsolika maro indrindra manerantany.
Amin'izao moa ny Amerikanina dia mikasa ny hidaroka ara-tafika an'i Venezuela, ny Rosianina etsy andaniny efa nandefa fitaovam-piadiana nokleary any an-toerana.
dimanche, 03 mars 2019 17:54
Lozam-pifamoivoizana RN3b: Roa mianadahy handeha hivavaka maty nofaohin'ny fiara
Raha niainga avy tao Ambohimanarina i Elisco sy Elisna, nanao taingin-droa tamin'ny moto handeha hamonjy fotoam-bavaka any Manantenina dia indrisy fa tra-doza vao 1km niaingana. Nifanehitra tamin'ny taxi-brousse avy tao Maroambihy izay handeha hosasaina ny moton'izy mianadahy.
Maty tsy tra-drano teo ilay tovolahy, fa ny anabaviny kosa maty teny an-dalana raha nentina hovonjena tany amin'ny hopitaly Andapa ka voatery niveridan-dalana.
dimanche, 03 mars 2019 17:50
Vietnam: Nandamoka ny fihaonana teo amin'i Donald Trump sy Kim Jong-un
Taorian'ny fihaonan'i Donald Trump, filoha amerikanina, sy Kim Jong-un, filohan'ny Korea avaratra, tany Singapour ny 12 jona 2018, dia nihaona fanindrohany tany Vietnam indray ny roa tonta ny alarobia 27-28 febroary 2019.
Momba ny anafoanana ny fitaovam-piadiana nokleara eo amin'ny Korea avaratra ny dinika.
Niraradraraka ny doka teo ampiandohan'ny dinika, niara-nisakafo ny roa tonta.
Nangataka ny analana ny sazy ara-toekarena iraisam-pirenena ny filoha Kim Jong-un ho tambin'izany fialana amin'izany programa nokleary izany. Tsy nanaiky izany anefa ny filoha amerikanina, ary nampiditra fialana hafa, ka nilaza fa mbola tsy fotoana analana ny sazy iraisam-pirenena izao. Namaly bontana koa moa i Kim Jong-un fa tsy anajanona ny programa nokleary raha izany no misy.
dimanche, 03 mars 2019 15:09
Venezuela: Mandrahona an'i Amerika ny Rosianina sy ny Sinoa
Donald Trump, filoha amerikanina dia nilaza fa efa eo ambony latabatra ny mety anafihana an'i Venezuela, anesorana ny filoha voafidim-bahoaka, fa tsy eken'ireo tandrefana, fa i Juan Guaido, filohan'ny mpanohitra no eken'izy ireo ho filoha vonjimaika. Nangataka ny Firenena mikambana ny Amerikanina ny ahafahana miditra ara-tafika any an-toerana mba ampidirana ireo fanampiana ara-tsakafo omen'ny Amerikanina
Nandrahona izany hevitra fanafihana ara-tafika izany ny Rosianina sy ny Sinoa, ary nandefa fitaovam-piadiana mahery vaika any Venezuela, niditra an-tsehatra hanampy ihany koa ny Iranianina.
Tamin'ny faran'ny taona 2018 moa dia efa nandefa fiara-manidina nokleary any an-toerana ny Rosianina.
dimanche, 03 mars 2019 14:45
Une pensée aussi pour les grands-mères à l'occasion de leur fête ce 3 mars.
dimanche, 03 mars 2019 14:43
Trafika "Bois de rose": Mbola ao Ambalatavoahangy ireo tantsambo 15 lahy tao amin'ilay sambo "Flying"
Nanamafy ny Talen'ny fandraharahana ny fonja Napou Jeremie, fa mbola miandry fitsarana ao Ambalatavoahangy ireo tatsambo sinoa 15 lahy tao amin'ilay sambo "Flying" izay nahatrarana andramena saika ahondrana.
Ny 06 febroary 2019 no nampidirana am-ponja azy ireo, ary mbola giazana mandraka ankehitriny eo anivon'ny seranan-tsambon'i Toamasina ihany koa ilay sambo.
dimanche, 03 mars 2019 13:36
Tsena sy fanjifana: 14.000 Ariary ny karaoty 1kg eto Sambava
Ny haratsin'ny lalàna Ambilobe -Vohémar ary koa ny halafon'ny saram-pitaterana amin'ny fiaramanidina sy sambo no ambaran'ireo mpivarotra eo an-tsena Antaimby no anton'io vidiny io, tsy hamono antoka hoy izy ireo.
Afarana avy any Antananarivo ny kataoty amidy aty Sambava. Mamokatra karaoty ihany ao Andapa saingy tsy mitovy tsiro noho ny toe-tany sy hamandoana ary ny haavon'ny toerana tsy mitovy i Vakinankaratra sy SAVA.
dimanche, 03 mars 2019 10:30
Polisim-pirenena: Nosoloina ny Commissaire Central Tsaralalana sy ny talen'ny PAF
Nafindra ho Commissaire Central ao Tsaralalana ny Commissaire principal de police Andrianalison Haminiaina, izay Commissaire Central teo Tanjombato, izy izany no nasolo ny Commissaire divisionnaire Tsaramonina Ravony.
Commissaire divisionnaire Andriampanohana Mandimbilaza Mahandry indray izao no Talen'ny Police de l'Air et des Frontières (PAF), nasolo toerana an'i Commissaire divisionnaire Tolozara Ruphin.